Home News Cabdi Maxamuud Cumar Baaritaan lagu sameeynaayay oo lasoo gabagabeeyay!!
Xeer ilaalyaha guud ee Itoobiya Berhanu Tsegaye, ayaa sheegay in lasoo gabagabeeyay baritaan uu xafiiska xeer ilalinta ku hayay mudooyinkaan Madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar.
Cabadi Maxamuud Cumar ayaa Jigjiga laga soo xiray kadib Saddex maalmood oo xiriir ah oo rabshado ay dad ku dhinteen ka dhacayeen Dowlad deegaanka Soomaalida bishii Agoosto ee sanadkii ina dhaafay.
Waxaana Xeer ilaaliyaha guud ee Itoobiya uu sheegay in dhawaan Maxkadeyntiisa ugu dambeysay ay qabsomi doonto, waxa uuna intaas ku daray in isaga iyo 45 ruux oo kale lagu soo oogay falal arxan darro ah oo Gowricid ay ku jirto, waxa uuna xusay in 6 kamid ah eedeysanayaashaasi oo uu Cabdi Maxamuud Cumar ku jiro ay xabsi ku jiran halka 40 kalana ay baxsad yihiin.
Baaritaankaan ayaa waxa uu qaatay muddo Shan bilood ah waxa uuna ugu dambeyn xeer ilaliyaha guud ee Itoobiya Berhanu Tsegaye, sheegay in la joogo waqtigii la maxkamadeyn lahaa eedeysanayaasha.
Cabdi Maxamud Cumar oo xilka Madaxweynenimo ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya hayay ku dhaaad 10 sano ayaa waxa la sheegay in dagaalo badan oo sukeeye oo isugu ka dambeeyay sidaas si lamid ahna uu amray go’aamo nafta lagu dhaafiyay dad ka aragti duwanaa.